Boqorka Sucuudiga iyo Obama oo ka wada hadlay arimaha Barga Dhexe – Radio Daljir
Seteembar 5, 2015 8:35 b 0
Sabti, September 05, 2015 (Daljir) — Boqor dalka Sacuudi Carabiya, Salmaan Bin C/casiis ayaa Magaalada Washington ee Xarunta Dalka Mareykanka kula kulmay Madaxweynaha Mareykanka, Barack Obama; iyadoo booqashadan ay noqonayso middii ugu horreysay oo uu Boqorku ku tago Mareykanka tan iyo intii uu Xukunka la Wareegay bishii Jannaayo ee Sannadkan.
Salmaan Bin C/casiis ayaa Sheegay in Waddankiisu uu Mareykanka kala Shaqeyn doono sidii Nabad looga soo Dabaali lahaa Dalalka Bariga Dhexe ku yaalla oo ay intooda badan ka socdaan Colaado Sokeeye.
Madaxweyne Obama ayaa dhankiisa Sheegay inuu Boqorka kala Shaqeyn doono arrimo ay ka mid yihiin dagaallada ka Socda Dalalka Yemen, Suuriya iyo Weliba Heshiiska dhawaan laga gaaray Barnaamijka Nukliyeerka Dalka Iiraan.
Sidoo kale Barack Obama ayaa ku cadaadiyay Boqor Salmaan inuu u Ogolaado Hay’adaha Gargaarka in ay si aan Shuruud lahayn uga Howlgalaan Dalka Yemen, Halkaasoo xulafada uu Sacuudiga hoggaaminayo ay dagaal kula jiraan fallaagada Xuutiyiinta.
Xiriirka u Dhexeeya Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa la sheegay inuu Xumaaday, kaddib markii uu Madaxweyne Barack Obama ka Qaabsaday duullaan ka dhan ah Xukuumadda Suuriya iyo weliba taageerada uu Mareykanka u fidiyay Heshiiska Nukliyeerka Iiraan oo uu Sacuudiga ka cabsi qabo inuu dalkaasi Sameysashada Hubkaas uu u fududaado.
Bishii May ee sanadkan ayuusan Boqor Salmaan ka qaybgelin shir-madaxeed ay Madaxda Waddamada Khaliijka ay kula kulmeen Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama.
Madaxweyne Gaas oo Maanta Booqday Jaamacadda Global Science University ee Gaalkacyo